Bluboo Xtouch၊ တုန်ခါမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်တကယ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်း။ | Androidsis
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများတက်လာခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခင်ကအနည်းငယ်လွှမ်းမိုးခဲ့သောဈေးကွက်တွင် Doogie သို့မဟုတ် Elephone ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်ကဏ္inတွင်ခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့မင်းနဲ့မင်းအကြောင်းပြောမယ် Bluboo နှင့်၎င်း၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသော Bluboo Xtouch
မပျက်စီးနိုင်သောနီးပါး Android ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာနေပါသလား။ သင်မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါသင့်ဖုန်းဖန်သားပြင်တစ်ထောင်ကွဲသွားသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသလား။ ကောင်းပြီ, Bluboo Xtouch ၏မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ရှင်းနေသည် မျက်နှာကျိုးလွယ်မှုမရှိတော့ပါ။ ပြီးတော့ဖုန်းကိုစာပို့ခနဲ့အရာအားလုံးနဲ့ပြောင်းဖို့ယူရို ၁၅၀ လောက်ပဲကုန်ကျတယ်။
မပျက်စီးနိုင်သော Android ဖုန်း Bluboo Xtouch
ကောင်းပြီ၊ ဒါကပထမဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ Android ဖုန်းမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့အဲဒီအချိန်ကသင်တို့ကိုပြပြီးပြီ လယ်ယာလုပ်သားများနှင့်အလုပ်သမားများအတွက် CAT ၏ဖြေရှင်းချက်များ သူတို့ကအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်ဖုန်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် စျေးနှုန်းအရမ်းတင်းကျပ်စွာ, ထို Bluboo Xtouch သူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သူအဘယ်သူမျှမရှိသည်။
ပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်သူကအလွှာတစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် သင့်ဖုန်းသို့ Gorilla Glass3ယခုထိအရာအားလုံးသာမန်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏အကာအကွယ်အလွှာသည် ၅ မီလီမီတာအထူရှိသည်ဆိုလျှင်၊ အရာရာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဒီမျက်နှာပြင်ဟာနေရာချနိုင်ဖို့လုံလောက်တယ်ထင်ပါသလား ကအပေါ်ကွန်ကရစ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်တူနှင့်ထိမှန်? ကောင်းပြီ၊ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက်ရလဒ်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ Bluboo Xtouch မျက်နှာပြင်ကအရာအားလုံးကိုကိုင်ထားသည်။
ထို့အပြင် Bluboo ယောက်ျားများသည်ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်က၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမဆိုပျက်စီးမှုခံစားခဲ့ရပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ် panel ကတစ်ခြားအပိုင်းအစတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်။ ဒုတိယတူရိုက်ပြီးနောက်သူသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ထိုကဲ့သို့သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကာကွယ်မှုကို၎င်း၏ဖန်သားပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်ကကျွန်တော်ပြီးသားတင်ပြ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Doogee Valencia2Y100, ၈ မီလီမီတာ Corning Gorilla Glass အလွှာရှိပြီး၎င်းသည်ဖုန်းကိုအခွံမာသီးများအက်ကွဲစေရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ မြင်မှယုံမည်။
Bluboo Xtouch သို့ပြန်သွားလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၎င်းသည်တန်ဘိုးရှိသောဖုန်းဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ Corning Gorilla Glass ကာကွယ်မှုဖြင့် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်သည် Full HD resolution (5 x 1080 pixel) သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ 6753-core MediaTek MT3နှင့် XNUMXGB RAM နှင့်အတူ LPDDR3 နှင့် 32 GB သိုလှောင်မှုပမာဏကို micro SD ကဒ်ထည့်နိုင်သည်။
Bluboo Xtouch ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာအာရုံခံကိရိယာမှဖွဲ့စည်းထားသောကင်မရာနှင့်အတူဖြစ်သည် ၁၃ မီဂါပစ်ဇယ် Sony IMX 214 ကြောင်းထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 8 megapixel ရှေ့မှန်ဘီလူးနှင့် 3.050 mAh ဘက်ထရီကိုပေါင်းထည့်ပါက၎င်းသည် Bluboo ဖုန်းအသစ်၏ hardware အားလုံး၏အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန်ထက်ပိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကော့တေးတစ်ခုရှိသည်။
သင်နောက်ထပ်လိုချင်သေးလား? ကောင်းပြီပေါင်းထည့်ရအောင် လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ home ခလုတ်တွင်တွေ့ရပြီး၎င်း၏ကျောဘက်တွင် 3D ဖန်သားပြင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Android 5.1 နှင့်လက်မောင်းအောက်တွင်ရောက်ရှိခြင်းသည်သင်စျေးပေါ။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖုန်းကိုရှာဖွေနေပါက Bluboo Xtouch သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Bluboo Xtouch သည်တုန်ခါမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်တကယ့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်းဖြစ်သည်
အန်တိုနီယို Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
သံရိုက်ရိုက်။ မရပါ သိပ်ပြီးမခဲယဉ်းသောထင်မြင်ချက်မရသည့်မာကျောသည့်ကြွေပြားကိုဖုန်းပေါ်သို့ တင်၍ တူတစ်လုံးရရှိသည်ဆိုပါစို့။
များစွာသောဖုန်းများဖြစ်ကောင်းတူညီသောအရာထောက်ခံပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော bullshit ...
နှစ်လသာပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်ခြစ်ရာများနှင့်သေးငယ်သည့်အဖုအထစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုမျှကာကွယ်မှုမရှိ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ပြီးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်ဘက်ထရီ၏နောက်ထပ်ကျရှုံးမှုတစ်ခုသည် Samsung ထက်ဝက်စွမ်းအင်သက်တမ်းကြာရှည်နေပြီးကင်မရာသည်အိမ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ရေးရန်အချည်းနှီးပင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းစျေးနှုန်းအတွက်မူမဆိုးပါ။